चुनाव होइन खाद्यान्न देऊ – Sourya Online
चुनाव होइन खाद्यान्न देऊ
सौर्य अनलाइन २०७० असोज २३ गते २३:२० मा प्रकाशित
मुलुक चुनावमय बन्दै गएको छ । यही अवस्थामा चुनावमा गए सशक्त प्रतिकार गर्ने नेकपा–माओवादी लगायत ३३ दलिय मोर्चा ले पर्चा छर्ने र अनुरोध गर्ने काम मात्र गरेमा निर्वाचन हुन्छ । नेताहरु सबै र खाना पाउने मतदाता लाई समेत चुनाव लागेको छ । दशैं तिहार जस्ता चाडलाई विर्सिएर चुनावी चर्चामा रमाउनेहरु पनि प्रसस्त छन् । तर भोकमरिको सामना गरिरहेका जनताले भने चुनाव होइन चामल देउ भनेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । उपत्यकामा दशैंका लागि खसी–बोका भित्र्याउन आतुर वर्तमान सरकार र जसरी पनि चुनाव हुन्छ भन्ने चार दलका नेताले वाजुराका भोका जनतालाई दशैंमा किनेर खानका लागि चामल समेत दिएनन् । एकातिर भोका जनता अर्कातिर दशैं र चुनाव । अनौठो अवस्था देखिदै छ । वाजुरा र डोटीका खाद्य गोदाममा चामल छैन । दशैं तिहार आई सकेको छ । चामल देउ भनेर भोका जनता कराई रहेका छन् । सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ भने नेता चुनावमा रंगिएका छन् । वाजुरा, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, मुगु र डोटी लगायतका जिल्लामा समयमै चामल पुर्‍याउने र अभाव हुन नदिने सोचमा सरकारले कहिल्यै देखिएन । जसले गर्दा ती जिल्लाहरुमा जहिले पनि खाद्यान्न अभावले सताई रहेको हुन्छ । दुर्भाग्य नै मान्नु पर्छ त्यस क्षेत्रको विकासका वारेमा अहिलेसम्मका सरकारले ठोस् रुपमा नीतिगत निर्णय लिन सकेको छैन । भाषण गर्दा कर्णाली अञ्चललाई विशेष योजना भित्र पारेको विषय उठाउने तर, काम भने वरको सिन्को पर नसार्ने गरिएको छ । यही कारणले त्यहाँका जनता दशैंमा पनि भोकै बस्नु पर्ने अवस्था आएको हो ।
नेपाली नेताले संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनका लागि हल्ला गरिरहदा वाजुराका जनता चामलका लागि धर्ना वसेका छन् । त्यहाँका जनताले आफूहरुले पहिला जिल्लामा खाद्यान्न भित्र्याउ त्यस पछि मात्र भोट माग्न आउ भन्ने आवाज वुलन्द पारेका छन् । कस्तो विडम्वना एकातिर दशैंमा भोका जनता अर्कातिर भोट माग्न जानु पर्ने नेता † खाद्यान्न नभित्र्याई भोट माग्न नआउनु भनेर भोकाहरुले अनुरोध गरिरहेका छन् । यदि त्यहाँका गोदाममा चामल पुर्‍याउन् काम नगर्ने हो भने निर्वाचन प्रचारका लागि नेता नगए पनि हुन्छ । भोकाएर आक्रोशित बनेका जनताले नेतालाई सहज रुपमा स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था वन्दैन । अहिले कुनै पनि दलका नेताले दशैं अगावै वाजुरामा खाद्यान्न पुर्‍याउ भनेर माग गर्न सकी रहेका छैनन् । जनताका समस्या भन्दा पनि सरकार र दलका लागि आफ्नै समस्या ठूला बनेका छन् जसले गर्दा जनता भोकै बस्न र दु:ख पाउन वाध्य भएका छन् । वाजुरा लगायतका जिल्लामा चामल अभावकै कारणले दशैं खल्लो हुदैछ । तर, यसले भोट माग्न वाजुरा प्रवेश गर्ने नेतालाई पनि असर पुर्‍याउने छ । त्यहाँ किन खाद्यान्न पुर्‍याउन कन्जुस्याँई गरिदै छ ? किन त्यहाँका जनताको माग प्रति वेवास्ता गरिदैछ ? के यो मुलुक सामन्तवादी सोच भएका नवधनाढ्य दलालहरुको मात्र हो , होइन भने जनता बचाउन नेताहरुले पनि पहल गर्नुपर्छ । अन्यथा त्यहाँका जनतामा सरकार र दलहरु प्रति चरम वितृष्णा जाग्ने छ । र, त्यसको फाइदा अर्कैले उठाउने छ ।
अहिले वाजुरामा भएको खाद्यान्न अभाव सामान्य जस्तो देखिएको छ । यसप्रति राज्यले वेलैमा चासो नदिएको प्रति पनि त्यति गम्भीरतापूर्वक सोचिएको छैन । तर, जव देशका नागरिकले राज्यले समेत आफूहरुलाई वेवास्ता गरेको ठान्छ तब त्यहाँ विद्रोहको विजारोपण हुन्छ । राज्य बाट कुनै सुविधा प्राप्त हुदैन र राज्यले जनता प्रतिको दायित्व पुरा गर्दैन भने त्यहाँ जनताले राज्य प्रति दुराग्रह राख्नु स्वभाविक हुन्छ । भोकमरीका सवालमा मात्र होइन अन्य विषयमा पनि हुने यही हो । यस्ते अवस्थामा राज्य र व्यवस्था प्रति विद्रोहको विजारेपण गर्न सहज हुन्छ । तसर्थ कुनै पनि जिल्लाका जनता खाद्यान्नको अभावमा भोकै बस्नु हुँदैन । सरकारले तुरुन्त खाद्यान्न उपलबध गराउनुपर्छ ।